Someone i know & Fake account Report ပြုလုပ်​နည်း | Online Service Center Myanmar -->
Someone i know & Fake account Report ပြုလုပ်​နည်း
ဒီ​နေ့ မ သိမ့်သိမ့်သူ က လာ​ပြောတယ်​။ သူ့ပုံ​တွေနဲ့ အ​ကောင့်တုလုပ်​ထားတာ Friend 5000 ​လောက်​နဲ့ Follower ကလည်း သူ့ထက်​​တောင်​များတယ်​ဆိုပြီး Profile link လာ​ပေးတယ်​။ ကိုယ်​က ဝင်​ကြည့်လို့မရ​တော့ D ပဲထားတာလား၊ ကိုယ်​​တွေကို Block ပဲထားတာလားမသိဘူး။ ကြည့်မရတာနဲ့ Profile link သူများကို​ပေးပြီး ဝင်​ကြည့်ခိုင်​း​တော့ မြင်​ရတယ်​တဲ့....။
ကိုယ်​​တွေ စဉ်းစားလို့မရတာက ကိုယ်​​တွေအ​ကောင့်ကို Block ထားတာဘာ​ကြောင့်လည်းဆိုတာကိုပဲ။ ကိုယ်​ကဖြင့်သူ့ကို သိ​တောင်​ မသိတာကို Block ထားတယ်​တဲ့။ 😄😄😄
ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်​​တော့ အ​ကောင့်တုဖွင့်ထားတဲ့သူက ကိုယ်​​တွေကိုသိတဲ့ အ​ကောင့်သူခိုးလူ​ဟောင်းအုပ်​စုထဲကဖြစ်​မယ်​။ IA( Instant Articles ) နဲ့ လုပ်​စား​နေသူ​တွေထဲက ဖြစ်​လိမ့်မယ်​လို့ ခန့်မှန်းမိတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်လည်း သူ့အ​ကောင့်တုကို Report လာထုမှာစိုးလို့ ကာယကံရှင်​နဲ့ ကိုယ်​​တွေအ​ကောင့်ကို Block လာလုပ်​ထားတာဖြစ်​လိမ့်မယ်​။ 😄😄😄
ကဲ... ကျွန်​​တော်​နဲ့ ကာယကံရှင်​ ၂ ဦးကိုသာ Block လုပ်​လို့ရမှာပါ။ ကျန်​တဲ့သူ​တွေကို​တော့ သူ Block ထားမှာမဟုတ်​တဲ့အတွက်​ သူများပုံ​တွေနဲ့ လုပ်​စား​နေတဲ့ အ​ကောင့်တုကို Report ​လေး ဝိုင်းလုပ်​​ပေးလိုက်​ကြပါဦး။
အဓိက က‌တော့ မ #သိမ့်သိမ့်သူ အ​ကောင့်ထဲက Friend ​ေတွက ပိုပြီး ကူညီ​ပေးဖို့လိုပါတယ်။
Someone i know ရယ်​ Fake account ရယ်​ ၂ နည်းနဲ့ Report လုပ်​​ပေးကြပါ။
မလုပ်​တတ်​ဘူး။ မလုပ်​ပါနဲ့ လုပ်​တတ်​​အောင်​ တင်​နည်းစာ​ရော Video နဲ့ပါ လုပ်​​ပေးထားပါတယ်​။ 😁😁😁
Video File ကြည့်ရန် -
Someone i know & Fake account Report ပြုလုပ်နည်း။
ကိုယ့် Friend List ထဲက အသိ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့Name နဲ့သို့မဟုတ် Photo နဲ့ or ( ၂ ) မျိုးလုံးနဲ့ Account တုတွေ့ပြီဆိုရင် ဒီလို Report လုပ်ပါ။
1. အရင်ဆုံး Report လုပ်မည့် Account Timeline ထဲကိုဝင်ပြီး Message နောက်က အစက်လေး ၃ စက်ကိုနှိပ်ပါ။
2. ပေါ်လာတဲ့ထဲက Give feedback or report this profile ကိုနှိပ်ပါ။
3. Pretending to Be Someone ကိုနှိပ်ပြီး အောက်နားက A Friend ကိုရွေးပြီး Send ပါ။
4. Which Friend? ဆိုတဲ့ box လေးတက်လာရင် Search box ထဲမှာ အဲ့ဒီ Friend ရဲ့ Account Name ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ကိုယ် ကူညီပေးချင်တဲ့ Friend Account Name လေးပေါ်လာရင် နာမည်ကို Select ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
5. Report Profile ကို နှိပ်ပါ။ ( Popup box လေးတက်လာပါမယ် ခနစောင့်ပါ။ )
6. I believe that this goes against Facebook's Community Standards နောက်က အကွက်လေးမှာ အမှန်ခြစ်ပြီး Report ကိုနှိပ်ပါ။
7. Done ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးလျှင် Fake Account ဆိုတာနဲ့ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါ။
2. ပေါ်လာတဲ့အထဲက Give feedback or report this profile ကိုနှိပ်ပါ။
3. Fake Account ကိုနှိပ်ပါ။
4. Report Profile ကို နှိပ်ပါ။ ( Popup box လေးတက်လာပါမယ် ခနစောင့်ပါ။ )
5. I believe that this goes against Facebook's Community Standards နောက်က အကွက်လေးမှာ အမှန်ခြစ်ပြီး Report ကိုနှိပ်ပါ။
6. Done ကိုကိုနှိပ်ပါ။
အထက်​​ဖော်​ပြပါ ( ၂ ) နည်းလုံးနဲ့ မဖြစ်​မ​နေ ထု​ပေးပါ။
Report ထုရမည့်အကောင့် ၂ ခုက ဒီမှာ....
Fake Account 1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100027447430864
Fake Account 2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100029761597693
Fake account 1 က အဓိကပဲ ​နောက်​တစ်​ခုက ခနနဲ့ ကျမှာ... 😁